Forum serasera malagasy NY TANJAKY NY FINOANA KATOLIKA - Dinika forum.serasera.org
NY TANJAKY NY FINOANA KATOLIKA
Fitohizan'ny hafatra : NY TANJAKY NY FINOANA KATOLIKA
tianabeloo - 12/12/2017 14:59
Ety am-boalohany aho dia te hanamarika fa sady tsy mpandalina no tsy mpahay tantara, fa noho ny zavatra hitako tsindraindray eny @loharanom-baovao samihafa eny dia voakitikitika nys aiko hitady valinteny.
- Zava-nitranga : tato anatin'ny erintaona aho izay no nanomboka nahafantatra ny fisian'ireo "zana-piangonana" katolika maromaro ary isan'ny matanjaka sy manana ny toerany avokoa. Hatreto aloha dia tsisy akony na nahenoina vaovao fa misy eto amintsika eto Madagasikara anefa izany fa any ivelany ihany, any Eoropa indrindra indrindra.
- Fanontaniana : ka lasa ary ny saiko hoe, raha ny tanjak'ireo "zana-piangonana" ireo (misy manao hoe sekta) anefa dia mahagaga ny tsy dia mampalaza azy ireo.
Sintomiko vetivety anefa ny saintsika hijery an'ireo zana-piangonana misy eto amintsika izay ny ankapobeny dia vokatry ny fisitahana t@ fiangonana "réformé" (indrindra ny FJKM raha ny tsikaritro aloha). Izy ireo dia manana ny tanjany sy ny hareny avokoa, ary zary hisongona ireo "fiangonan-dehibe" aza raha nny fahefany sy ny fananany no jerena.
Dia ny fanontaniana ary dia hoe : matanjaka tokoa izany ny ny fiangonana Katolika romana matoa mahasarona lalandava ireo zana-piangonana nisitaka taminy mihoatra ny fiangonana hafa????
endriny - 12/12/2017 17:30
Matanjaka ny poamaso noho ny malemy koa. Eto Madagasikara isika dia matanjaka ny Katolika na any Borezila. Fa ataovy hoe any Sina ange na Indaonezia e? Na koa ao Iraka sy Soamalia.
Tsy misy mafy ohatran'ny vato hono fa rehefa tsy miteny angeren'ny vorona
rhaj0 - 12/12/2017 17:39
Ka ny Katolika anie kalabe ee...
Inona no tsy vitan'ny VOLA...
TEna hotsahotsan'ny hoe, (ny vitan') i Jesoa (katolika) izany mahery noho (ny vitan') i Jesosy (protestanta)..
Ilay Rahisa, fiantson'ny gasy t@ 1600s Azy, araka ny notaterin'i Flacourt, i Rahisa moa dia toa tsy mahavita azy izany, ary dia tena very tanteraka eee....
rhaj0 - 12/12/2017 19:05
Ny VOLA eo ihany, fa ao koa ny hoe
1- TSY DEMOKRASIA ny Leglizy. TSISY demokrasia ao. Dictature malefaka (fangolika) ny ao. Fa mankafy ny ho priatin'ny dictature nefa ny mpanaraka azy ao.
2- Ny rafitra K dia mipetrapetraka tsara ary dia miady amim-bato izay TSY mitovy revy aminy. Miady @ rafitra ianao.
3- ny loyauté @ debakely sy debabe ao dia TSY (tena hoe) mifototra @ izay mampa-loyal mahazatra amina olona/hevitra iray, hoe hitanao tsara na mifanentana @ eritreritrao ao, fa miantomboka amina revy midoboka avy any ambony any aloha. Fa mety ho tara aminy ihany anefa ianao aoriana: io ilay tonga @ ilay hoe, voan'ilay Syndrome de Stockholm
tianabeloo - 13/12/2017 06:25
" Fa mety ho tara aminy ihany anefa ianao aoriana: io ilay tonga @ ilay hoe, voan'ilay Syndrome de Stockholm"
Ho sanatria anie izany, tonga aho dia kamo mieritreritra ilay fangolika voaresaka etsy ambony fa tena marina tokoa.
Asa hoe tsy takatr'ireo ondry ao ve izany sa iniana tsy takarina satria metimety @fanamboarana ny sainy.
rhaj0 - 13/12/2017 17:26
Izao izao efa naverimberiko teto ihany ilay hoe, ny Amerindiana dia tena vaky vava miihintsy, rahefa nahita ny "mahantra-ho-faty" nitongorona teo @ "vavahady volamena" an'i Vatican. Satria ho'a amin-dreo, sahala@ gasy taloha koa, dia TSISY olb mitovy aminy azo avela ho "mahantra-ho-faty" izany eto @ ity tany ity.
Dia nefa ny "vavahady volamena" an'i Vatican tsy mba ampiasainy hanampiana ny mahantra.
Rahefa mandeha any Roma anefa HONO ianao, dia vaky vava koa fa kay TSISY izany "mahantra-ho-faty" mitongorona eo @ "vavahady volamena" an'i Vatican izany.
ka tsy tiany handoto ny volamenany ve, dia nafenin-dreo daholo ny "mahantra-ho-faty" rey olona aaa ????
Matanjaka ny Finoana Katolika eeeee.... hozy ny sioze.
endriny - 18/12/2017 06:06
Ianareo tsy mahita hoe: Maria ny fiangonana mifoha tsikelikely @ fananganana hainjery manontolo etsy sy eroa dia efa mitady lalan-kivoahana izy izany fa efa mety tsy mandaitra intsony ilay mivarotra Atra anaty ambiaty